७० हजार डलरमा सन्दिप क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) मा अनुबन्ध - Experience Best News from Nepal
७० हजार डलरमा सन्दिप क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) मा अनुबन्ध
नलाई सीपीएलको क्लब बार्बाडस ट्राइडेन्टसले ७० हजार डलर (करिब ७८ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ) मा अनुबन्ध गरेको हो ।
बार्बाडसले बेलायतको लण्डनमा जारी ड्राफ्टको पाँचौ राउण्डमा सन्दीपलाई यो सिजनको सीपीएलका लागि अनुबन्ध गरेको हो । समाचार अनुसार उक्त स्थानमा छानिने खेलाडीले न्यूनतम् ७० हजार अमेरिकी डलर पारिश्रमिक पाउनेछन्।
सन्दीपलाई अनुबन्ध गरेको बार्बाडस ट्राइडेन्टसले अहिलेसम्म एलेक्स हेल्स, जेसन होल्डर, आसिफ अली र वाहब रियाजलाई टिममा लिएको छ। सीपीएलको ड्राफ्टमा नेपालबाट सन्दीपसँगै युवा अलराउण्डर दिपेन्द्रसिंह ऐरी, तीब्र गतिका बलर सोमपाल कामी र मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान रोहितकुमार पौडेल पनि परेका थिए ।
यो सिजनको सीपीएल क्रिकेट आगमी सेप्टेम्बर ४ देखि अक्टोबर १२ तारिखसम्म वेस्टइन्डिजमा आयोजना हुँदैछ। पहिलो सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर उदीयमान प्रतिभा घोषित सन्दीपले यो पटक आकर्षक पारिश्रमिक पाउने भएका छन्। भएका थिए । गतवर्ष सन्दीपले सीपीएलको सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस प्याट्रियट्सबाट खेलेका थिए। उनलाई त्यो बेला क्लबले ५ हजार डलरमा मात्रै अनुबन्ध गरेको थियो।
गत सिजन उनले ५ खेलबाट ७ विकेट झारेर आफ्नो प्रभाव देखाएका थिए।
बिग ब्याश लिगमा फर्किए सन्दीप, मेलबर्न स्टारले लेख्यो यस्तो स्टाटस
सन्दिपलाई नेपालको गौरव बढाउने मौका, इमरर्जिङ प्लेयर अवार्डको मनोनयनमा !! यसरी भोट गर्नुहोस
आइ पी एल खेल्न सन्दिप भारत प्रस्तान !! कहिले कहिले हुदै छ सन्दिपको टिम दिल्लीको खेल !! जान्नुहोस
हारको दबदबा बंगलोरमा बढेर ६ पुग्यो !! सन्दिपले लिए अर्को विकेट
आइ.पी.एलमा तेश्रो टिम बनेको डिल्लीबाट सन्दिपले पाउदै छन् यति ठुलो रकम ??
पीएसएलमा सन्दिपको धारिलो बलिंग !! यस्तो सानदार नतिजा पदर्शन
विश्वकप क्रिकेट : श्रीलंकालाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लने दाउमा अष्ट्रेलिया
अलराउण्डर शकिब अल हसनको दबदबा २ सय ५० विकेट र ५ हजार रन पूरा
इमरान खान जसले जिताएका थिए पाकिस्तानलाई १९९२ को क्रिकेट विश्वकप
आइ.पी.एलमा वाटसनको त्यो अटुट पदर्शन, घुँडा रगताम्य हुँदा पनि डटिरहे
आईपीएल : राशिद चम्किदा पञ्जाबमाथि हैदरावादको फराकिलो जित